नेपाली दर्शन– नेपालको ‘सौम्य शक्ति’
समावेशिताको प्रारम्भ कांग्रेसले गरेको देउवाको दाबी
सम्पादकीय विहीबार, असोज १६, २०७६
लोक–जीवनमा आधारित नेपाली दर्शन नै भूराजनीतिक सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) पनि हुन् जसको जगमा हामी नेपाली सदियौंसम्म आत्मसम्मान सहितका नेपाली बन्न सक्छौं।
६ र ७ असोजमा काठमाडौंमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरू सहितको उपस्थितिमा चीनमा सत्ता चलाइरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरूको नेतृत्वमा ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ बारे ‘प्रशिक्षण’ कार्यक्रम चल्यो । सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा भएको प्रशिक्षण लगत्तै नेकपा र सीपीसीबीच पाँच वर्षसम्म उच्चस्तरको सहकार्य गर्ने सम्झाैता पनि भयो ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्य स्वाभाविक दावी गरिए पनि दुवैको राजनीतिक विकासयात्रा विल्कुलै भिन्न भएकाले यसबाट पर्न सक्ने भूराजनीतिक प्रभावको आकलन अहिल्यै गर्न गाह्रो छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विचारबारे नेपालमा दिइएको प्रशिक्षणले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा ठूलै वैचारिक सङ्कट रहेको कटु सत्य उजागर गरेको छ ।
नेपालमा विचार र विचारधाराको सङ्कट नयाँ विषय भने होइन । २०३४ सालमा प्रकाशित नेपालायन–१ पुस्तिकामा डा.जगदीशचन्द्र रेग्मीको एउटा मन्तव्य यहाँ स्मरणीय छ । रेग्मीले लेखेका छन्, “आज संसारभरि बौद्धिकताको क्षेत्रमा जुन गति आएको देखिन्छ, सोको आंशिक प्रभाव पनि हामीमा आइनपुग्नु एउटा समस्या भएर उभिएको छ ।
बौद्धिकताको सुनौलो परम्परा भएका हामी नेपालीलाई यो वर्तमान यथार्थले गिज्याइरहेको जस्तो लाग्दछ ।” के थियो त त्यो बौद्धिकताको सुनौलो परम्परा ? अनि कसरी हरायो ? के थियो नेपाली वैचारिकी ? के हो नेपाली दर्शन ? यस वर्षको दशैं विशेष अङ्कमा हिमालले यही विषय उप्काउने प्रयास गरेको छ ।
दर्शनको सामान्य अर्थ ‘देख्नु, हेर्नु’ भए पनि दर्शनशास्त्रले जीवन र जगतबारे गहिरा कुरा गर्छ । जीवन, विचार, चेतना, बुद्धि, स्वभाव, व्यवहार, कर्म, मृत्यु आदिबारे मात्र होइन, प्रकृतिका मसिना कुरादेखि धर्ती र ब्रह्माण्डसम्मका विषयमा प्रश्न, बहस र सङ्कथन (डिस्कोर्स) गर्छ, निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न पनि ।
नेपालीले कहिलेदेखि यी विषयमा चिन्तन गर्न थाले ? यसबारे खोज जारी नै छ । तर, अहिलेको नेपाल राज्यमा लोकायत दार्शनिक बृहस्पति, ब्रह्मवादी दार्शनिक याज्ञवल्क्य तथा अष्टावक्र, साङ्ख्य दार्शनिक कपिलमुनि, न्याय दर्शनका अक्षपाद गौतम, वैशेषिकका कणाद, योगका पतञ्जलि र बौद्ध दर्शनका सिद्धार्थ गौतमको विशेष छाप र प्रभाव देखिन्छ ।
त्यसयता पनि किरात लगायतका दर्शनले खास भूगोललाई नछोएका होइनन्, दार्शनिकहरू पनि नजन्मिएका होइनन् । तर, यहाँ पनि अध्ययनकै कमी देखिन्छ ।
हामीकहाँ सरकारीस्तरबाट दर्शन विधामा काम थालिएको भने झण्डै सात दशक पुगिसकेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको एक महीनापछि ११ चैत २००७ मा ‘नेपाल दार्शनिक संघ’ स्थापना भयो । छरिएका दार्शनिक विचारधारालाई एकत्रित गर्ने र दर्शनको दिग्दर्शन गराउने उद्देश्यले स्थापित यो संघले स्थापनाको पाँच वर्षपछि पहिलो प्रकाशन ‘दर्शन–प्रवेशिका’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गर्दै राजा महेन्द्रले शासन लिएसँगै दर्शन जस्तो बृहत् क्षेत्र तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संस्कृति विभागभित्र खुम्चियो । राजतन्त्रको विघटनपछि बल्ल २०६८ सालमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानभित्र छुट्टै दर्शन विभाग बन्यो ।
१०४ वर्षे राणाकालमा नेपाली दर्शन विभिन्न रूपमा दमित हुन पुग्यो । ३० वर्षे पञ्चायत राष्ट्रवादको अवधारणा ल्याउँदै आफैं राजनीतिक दर्शन बन्ने प्रयत्नमा लाग्यो ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासको झ्ण्डै तीन दशकयता विभिन्न समयमा दबिएका र छोपिएका नेपाली दर्शन प्रस्फुटित हुने क्रममा छ । तर विडम्बना के हो भने, दर्शनलाई बौद्धिक विलासको रूपमा लिइयो । जीवनसँग नजोड्दा यो जटिल र रूखो विषय बन्दै गयो ।
नेपालीमा अन्तरनिहित समन्वय र सहअस्तित्वको सूत्रले सबै समुदायलाई एकठाउँ उनेको छ । असहज परिस्थितिमा एक ढिक्का भएर जुट्नु नेपाली जीवन चरित्र हो । त्यसो भए, यो जनजनमा निहित समन्वयकारी, सह–अस्तित्ववादी, समभाव, सहिष्णुता, जब्बरपनको बीज के हो त ?
प्रश्न जति सहज छ उत्तर उति नै कठिन । किनकि, यी सामूहिकताको भाव हुनुमा न कुनै व्यक्तिविशेषको योगदान अहम् छ, न भूगोल वा खास भाषा, न त धर्म वा सम्प्रदायकै ।
संसारकै उच्च हिमवत्खण्ड शिर पाएको नेपालले अनुपम जैविक विशेषता र जातीय विविधताको साथ पाएको छ । विभिन्न कालखण्डमा शासक, सन्त, विद्वान, राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, कलाकार र सर्वसाधारण समाजका नायक बनेका छन् । अर्थात् नेपाली चेतनप्रवाहका अनुहार बनेका छन् ।
यी सबैको केन्द्रमा नेपाली लोक जीवनपद्धति छ, जसको भावभूमिमा आजको नेपाल उभिएको छ । ग्रामीण जीवन नै हाम्रो विचार र दर्शन निर्माणको यस्तो स्रोत हो, जसले हामीलाई यी गुणहरूसँगै हुर्काइरहेको छ । लोक–जीवनमा आधारित यी नेपाली दर्शन नै भूराजनीतिक सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) पनि हुन् जसको जगमा हामी नेपाली सदियौंसम्म आत्मसम्मान सहितका नेपाली बन्न सक्छौं ।
सबैमा बडादशैंको मङ्गलमय शुभकामना !
आइतबार, साउन २५, २०७७ विशेष अदालतमा थुनुवाका बाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित